HALKAAN KA AKHRISO W.W MOGTIMES EE MAANTA 21-NOV-2019
Thursday November 21, 2019 - 09:21:10 in Wararka by Mogadishu Times
Qodobo Laga Soo Saaray Kul ankii MW Farmaajo Iyo Madaxdii Hore Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sh.Maxamuud ayaa faah faahfiyay kulankii Shalay dhexmaray isaga iyo Sh.Shariif Sh Axmed iyo Madaxweyne Ma xamed Cabdullaahi Farmaajo. M
Qodobo Laga Soo Saaray Kul ankii MW Farmaajo Iyo Madaxdii Hore Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sh.Maxamuud ayaa faah faahfiyay kulankii Shalay dhexmaray isaga iyo Sh.Shariif Sh Axmed iyo Madaxweyne Ma xamed Cabdullaahi Farmaajo. Md.Xasan Sheekh oo Habeen hore shir Jaraa'id warbaahinta ugu qabtay Maga alada Muq disho ayaa waxaa uu sheegay in Mada sha Xisbiyada iyo Madaxweyne Farmaajo ay ku heshiiyeen 5 qodob. Sidoo kale Xasan Sheekh ayaa waxaa uu tilmaamay in Madaxweyne Farmaajo uu ka garaabay xayiraadii dhawaan la sa aray Sheekh Shariif iyo Wafdiga Madasha Xisbiyada Qaran. Dhinaca kale ma jiro weli wax war ah oo kasoo baxay Madaxtooyada oo ku aaddan kulankii Madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya iyo Madaxweyne Maxa med Cabdullaahi Farmaajo.
Hoos ka Akhriso Qodobada lagu heshii yay
1-Madaxweyne Farmaajo waxa uu ka gar aabay, raali gelinna ka bixiyey is-hortaagy adii madaxdii hore ee dalka lagu sameyey.
2-In doorashooyinka hay’ada ha dastuuri ga ah oo dhan ay xiligooda ku dhacaan
3- In la ilaaliyo dastuurka, xuquuqda dastu uriga ah ee muwaadinka Somaliyeed
4- In hay’adaha amniga aan loo adeegsan siyaasadda, islamarkaana siyaasiyiinta ay san siyaasadeysan amniga dalka.
5- La dagaalanka Al-shabaab in meel loo ga soo wada jeesto.
Ra’iisul Wasaaraha XFS Md.Xasan Cali Khayre oo Habeen hore dalka dib ugu soo laa btay, ayaa Shalay kormeeray xarumaha wasaradda Warfaafinta, Haweenka , Kal luumeysiga, ganacsiga, Beeraha iyo xan aanada xoolaha.
Kormeerka ayaa qayb ka ah hawlaha lagula soconayo hanaanka hir-gelinta qor shayaasha hor-tebinta leh ee wasaaraha xukuumadda iyo hay’adaha kale ee dawla dda ay ku leeyihiin tubaha qaranka iyo sa re u qaadidda isla xisaabtanka, hufnaanta iyo daah-furnaanta.
R/Wasaaraha oo wasaaradaha uu kor meeray ugu tegay howl-wadeenno ku jira shaqooyinka ayaa ka xog wareystay xaal adda shaqo, waxuuna ku dhiirri geliyay in ay laba jibbaaraan shaqooyinka ay ku gud anayaan waajibaadka ka saaran horumar inta iyo soo celinta sharafta iyo karaama da ummadda Soomaaliyeed.
Xildhibaan Sakariye "Wasaaradda Ma ali yada waxaa ay joojisay in fursado shaqo lasiiyo dad Soomaaliyeed”
Xildhibaan Sakariye Xaaji Maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada Golaha Shac abka ayaa ku eedeeyay Was aaradda Maali yadda Xuku um adda in aysan ogoleyn in Mu waadiniinta Soo maaliyeed Sha qooyin loo abuuro.
Waxaa uu sheegay in Wasaaradda Maa liyadda 3dii sano ee lasoo dhaafay ay iska diiday in Shaqaalaha sida lacag la’aanta ah ugu shaqeeya Wasaar addaha laga dhi go Shaqaalo rasmi ah iska ba daa in la qo ro kuwo cusub.
Wasaaradda ayuu xusay inay sidoo ka le hoos u dhigtay qorshihii la doonaayay in lagu xoojiyo in la helo lacag cusub oo dal ku leeyahay.
Xil.Sakariye ayaa tilmaamay in dalka haddii uusan helin lacag shaqeysa inuu san Madax banaaneyn.
"Wasaaradda Maaliyadda waxaa ay joo jisay in fursado shaqo la siiyo dad Soo ma aliyeed” ayuu yiri Xildhibaan Sakariye.Xigasho:Radiorisaala.com
Booliska oo faah faahiyey howlgalkii Dhuusamareeb
Ciidammada Ammaanka ayaa maga alada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug waxaa ay ka sam eeyeen Howlgal lagu Xaqiijinayo Amniga, iya ga oo Baaritaan ku sameeynaya Gaa diidka iyo Dadka intaba.
Howlgalka ayaa Baabuurta looga fiiqa yey Bacda Madow ee ku Dahaaran Muraa yadaha Gawaarida, iyada oo M/Dhuusa mareeb laga mamnuucay Hubka Sharci darada ah iyo Gaadiidka Muraayadaha Madow.
Taliyaha Ciidamada Booliska dhuusa mareeb ahna taliyaha Ciidanka xasilinta Caasimadda G/le C/hi Xasan Macallin oo howlgalkaas faah faahinayay ayaa sheeg ay in lagu soo qabtay dad watay hub sha rci-darro ah. Waxaa uu sheegay in dadka asi cadaa ladda la marsiin doono kuwo kal ena lagu raad joogo haba ugu badnaadaan kuwa ist icmaala waxyaaba ha maanka dooriya. Si doo kale taliyaha waxaa uu hadalkiisa int aasi ku daray in taliska Booliska Dhuusam areeb aysan marnaba ogolaan doonin dad ka hubka sharci darrada ah ku dhex wata Magaa lada.
Shir looga hadlayay Arrimaha Dastuur ka oo Muqdisho lagu soo geba-gabeey ey
W/Dastuurka XFS ayaa M/Muqdisho ku soo gabagabeysay shir wadatashi ah oo ku saabsan dhameystirka Dastuurka K MG ah kaas oo ay la yeelatay aqoonyaha nadda Soomaaliyeed.
Kulankaas wadatashiga ah ayaa socd ay muddo labo cisho ah waxaana looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dhameystirka Dastuurka iyo sidoo kale qo dobadda u baahan wax ka badalka.
Wasiir ku xigeenka W/Dastuur Dr Xuse en Cabdi Cilmi oo soo xiray kulanka wada tashiga ahaa ayaa sheegay in aqoonta dadka Soomaaliyeed loo baahan yahay ga ar ahaan dadka Waxbarashadoodu heer ka sare tahay.
"Waxaan u baahanahay aqoonka ku jir ta Aqoonyahanada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan max aa yeelay waxaa ku jira wax badan oo aan dhexdeena laga heleyn sidoo kale faa’iido badan ugu jirto dadka Soomaaliyeed” sidaas waxaa yiri Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Dastuurka Soomaaliya.
Waxaa Shalay lagu dilay gudaha xa runta Xalane ee magaa lada Muqdisho Alm as Elman oo ay walaalo yih iin gabadha u sharaxan biladda Nobel Elwad Elman
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sida uu dilkeeda u dhc ay, hasse ahaatee wax aa la ogyahay ilaa iyo hadda in ay ku dhacday xabad ugu soo gashay gaari ay la soctay, isla markaana ay u geeriyo otay dhaawac soo gaaray.
Xerada Xalane ee Muqdisho ayaa ah goob ammaankeeda aad u adag yah ay, isla markaana ay ku yaallaan safaa rado sidoo kalena ay degan yihiin Ajaanib far abadan. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay hay'adda Amaanka oo la xiri ira dilka Almas Elman oo mar soo noqo tay xoghayaha joogtada ah ee Safaaradda So omaaliya ku leedahay dalka Kenya.
Kulanka Labada Aqal Ee Baarlamaanka Oo shalay Ka Furmay Muqdisho
Waxaa shalay M/Muqdisho ka furmay kulankii wadajirka ee Xildhibaanada lab ada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Kulanka ayaa waxaa si wadajir ah u Shir Guddoominaya Guddoomiyeyaasha Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ee dal ka Maxamed Mursal Sh.C/xmaan iyo Ca bdi Xaashi Cabdullaahi.
Sidoo kale Kulanka Maanta ayaa ku fur may 171 mudane oo ka kala tirsan Xildhib aanada G/Shacabka iyo Aqalka Sare.
Ajendaha kulankaan wadajirka ayaa ah An saxinta Ajendaha iyo Akhrinta 1-Aad Qo oda ha Miisaaniyadda 2020-ka.
Waxaa Shalay Magaalada Jowhar ka furmay tababar uu soo qaban qaabisay da lladda SOMA oo gacan ka helaysa haya daha IMS-FOJO.
Furitaanka tababarka ayaa waxaa ka Soo qayb galay madax ka tirsan Hir-shab eelle sida, G/Ku xigeenka Gobalka ee dhin aca Ammaanka Abshir Caddow Hiraabe, Duqa magaalada Jowhar Saalax Muudey Cali, Wasiiru dowlaha Wasaaradda Warf aafinta Maxamed Axmed Faarax Kolombo iyo Agaasimaha guud ee Wasaaradda Warfaafinta Maxamed Xasan Kulmiye .
Xogheyaha SOMA Maxamed Cabduwaha ab, oo hadal ka jeediyey furitaanka Taba barka ayaa sheegay in tababarka Wariyaa sha ka qayb gelaya ay ka kala yimaadeen Beledweyne, Balcad iyo Jowhar.
Wuxuu u mahadceliyey IMS-FOJO oo ka caawisay SOMA inay tababarkan qab taan,madaxda Hirshabeelle ee ka qayb galay furitaanka Tababarka sida Wasiiru dowlaha Wasaaradda Warfaafinta, gudo omiye ku xigeenka dhanka amaanka Gobalka , duqa magaalada Jowhar iyo agaasiamaha guud ee Wasaaradda warfaafinta.
Xogeyaha ayaa sheegay in tababarka ay muhiimad wayn u leeyahay wariyaasha Hirshabeelle maadaama uu ku saabsan yahay bedqabka suxufiga oo muhiim ah marka Soomaaliya Wariyeyaasha ka Shaq eeya loo fiiriyo gaar ahaan Maamul gobal eedyada oo aan badanaa tababar helin.
"Waxaan rejeynaynaa inaad ka faa’iidey san doontaan casharada ku saabsan bad qabka saxafiga oo ay idin bari doonaan khubaro uu hogaaminayo Ustaad Albadri” ayuu yiri Maxamed Cabduwahaab
Isku xiraha IMS-FOJO Abukar Albadri ayaa khudbad ka jeediyey kuna faahfaahi yey sida uu ugu faraxsanyahay asaga oo metalaata IMS-FOJO inuu tabarkan furit aankiisa ka qayb galo, wuxuu sharaxay muhiimadda Tababarkan ay iska kaashad een IMS-FOJO iyo SOMA, wuxuu u ma had celiyey madaxda Hirshabeelle ee kala qayb galay furitaanka Tababarka sida gud oomiye xigeenka Gobalka ee dhanka ama anka , Duqa magaalada Jowhar, wasiiru dowlaha wasaaradda Warfaafinta iyo Aga asimaha guud ee wasaaradda Warfaafin ta.
Agaasimaha Radio Jowhar Maxamed Abukar Caseyr oo ka mid ahaa agaasimay aashii Warbaahinta ee ka qayb galay furit aanka ayaa sheegay inay soo dhawayn ayaan tababarkan uuna yahay midkii ugu horeeyey ee nuucaan ah oo Jowhar lagu qabto.
"Anoo ku hadlaya magaca madaxda Wa rbaahinada ka howlgala Hirshabeelle gaar ahaan M/Jowhar waxaan qirayaa inuu yah ay tababarkan midkii ugu horeeyey ee nuu caan ah oo lagu qabto Jowhar” ayuu yiri Agaasime Caseyr.
Wuxuu sheegay inay wariyaasha ka howlgala magaalada tababarkan aad ugu baahnaayeen.
Wasiiru dowlaha wasaaradda Warfa afinta ayaa SOMA iyo IMS-FOJO uga mah adceliyey inay tababarkaan ku qabteen magaalada Jowhar, wuxuu sheegay in wa riyaasha Hirshabeelle ay aad ugu baahan yihiin tababarada nuucaan ah.
"Ka wasaarad ahaan aad ayaan u soo dhawaynaynaa waxaan rabnaa wariyeya asha Hirshabelle inay helaan tababarka nuucaan ah waana waxaan u baahnayn ayuu yiri”Wasiiru Dowlaha.
Dalladda SOMA oo gacan ka helaysa hayadaha IMS-FOJO ayaa horay waxaa ay tababaro noocaan oo kale ah ku qaba tay M/Muqdisho iyo qaar kamid ah gobol ada dalka Soomaaliya.
Heshiiskaan oo ku saabsan dhinaca dif aaca iyo Milateriga ayaa Wakiilo ka kala socday Dowladaha Itoobiya Iyo Imaaraad ka Carabta waxaa ay ku kala saxiixdeen shirka Bandhiga 16aad ee Diyaaradaha kaas oo ka socda Magaalada Dubai ee dalkaasi Imaaraadka Carabta.
Dowladda Itoobiya ayaa waxaa heshi iska u saxiixay Wasiirka Difaaca dalkaas lemmamegersa,halka Imaaraadka Carabta uu u saxiixay Wasiiru dowlaha Gaashaan dhiga Mohamed Bin Ahmed Al-Bowardi. Heshiiska oo ah mid isfaham ayaa dhig aya in la iska kaashado dhinacyada difaa ca iyo Millateriga,waxaana Wasiirka Difaa ca Itoobiya lemma megersa uu sheegay in heshiiskaas uu yahay mid xoojinaya danaha labada dal.
War lagu daabacay Wakaaladda War arka Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay in dowladda Imaaraadka ay dad aalo xoogan ugu jirto sidii ay xiriir wanaag san ula yeelan laheyd wadamada gobolka iyo Caalamka intiisa kale.
Dowladda Imaaraadka carabta ayaa horay markii uu xilka qabtay Ra’iisul Was aaraha Itoobiya Abiy Axmed waxaa uu u siiyey lacag dhan 3 Bilyan oo Dollar, iyada oo xilligaas dhaqaalo darri badan ay ka jir tay dalkaas.
Maxkamadda CQS Oo Soo Gaba-Gabe ysay Dhageysiga Dacwada Nin Loo Heysto Weerarkii Gaalkacyo
Maxkamadda darajada 1aad ee Ciidam ada Qalabka Sida ayaa Shalay soo Ga ba-gabeeysay dhageysiga Dacwada mid kam id ah raggii Qarax yada iyo Weerrada ku qaaday Xaruntii M/Gaalkacyo uu ku lah aa Sheekh lagu magaca abi jiray Cabdiweli Cilmi Yare.
Maxkamadda ayaa kal hore la horgee yay cadde ymo la xiriirka Kiiska lagu eede eyay Cabdullaahi Ca li Aadan, kaasi oo kamid ahaa raggii Qaraxyada iyo Weerar rada ku qaaday Xaruntii M/Gaalkacyo uu ku lahaa Cabdiweli Cilmi Yare.
Xeer ilaaliyaha Maxkamadda Ciidama da ayaa waxaa uu sheegay in Cabdullaahi uu si toos ah u dilay Askari ka tirsanaa Cii damo gurmad ah oo doonayay in xiligaas weerar socday soo Afjaraan.
Sidoo kale Xeer ilaaliyaha ayaa Max kamadda ka dalbaday in eedeeysane Ca bdullaahi Cali lagu rido xukun Dil toogasho ah.
Ugu dambeyntii Guddoomiyaha Maxka madda Ciidamada Qalabka Sida Gaashaa nle Sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa soo xiray fadhiga Maxkamadda, isagoona sheegay in Kiiska Ninkaas ay Maxkamad da Go’aan kasoo saari doonto.
Si kastaba Weerar isugu jiray Qara xyo iyo mid toos ah ayaa waxaa lagu qaad ay Xarun ku taallay K/M/Gaalkacyo, isla markaan uu ahaa Sheekh lagu maga caa bi jiray C/iweli Cilmi Yare, iyadoo ha lkaas lagu dilay dad badan iyo Sheekhaasi.
Booliska oo bilaabay baarista dilkii Elmaas Alman
Shalay waxaa Gudaha Xerada Xalane oo ay AMISOM gacanta ku hey so lagu dhex-dilay Elmaas Elman oo mar soo noqotay Xog hayaha 1aad ee Safa ar ada Somaliya ee Kenya, ha atana ka tirsaneyd Xafi iska xiriirka & Isgaarsiinta ee Midowga Yurub.
Dilka oo ilaa iyo hadda si rasmi ah aan loo faah faahin ayaa ka dambeeyay,kadib markii sida la sheegay rasaas lagu furay Ga ari ay saarneed,kadib dhaawac soo gaaray ay u geeriyootay,waxaana dilkaas War kas oo saaray booliska Soomaaliya.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliye ed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa shee gay in Booliska Soomaaliya gaar ahaan laan ta Dambi baarista ee CID-da laga furay Gal-dacwadeed ku saabsan dilkaas,isla markaa na ay bilaabeen baaritaanka sida dilka uu u dhacay iyo dadkii ka dambeeyey.
Sidoo kale Taliyaha waxaa uu sheegay in baaritaanka ay ka qeyb qaadanayaan Sara akiil Sar sare oo khibrad u leh dhacdooyinka noocaan oo kale ah.
marka laga soo tago hadalka taliyaha Cii danka Booliska Soomaaliyeed horay ayaa M/Muqdisho waxaa loogu dilay dad xilal mu hiim ah ka haayay Dowladda oo uu kamid ahaa Guddooomiyihii G/Banaadir Eng, C/maan Yariisow,hayeeshee aysan jirin dad loo maxkamadeeyey.
Madaxweyne Biixi oo daahfurey tabab ar la siinayo dhallinyaro loo carbinayo Saraakiil Ciidan
Madaxweyne Biixi ayaa Shalay deega anka Darar-weyne ee duleedka M/Hargeysa ka daah-furay mas hruuc ballaadhan oo lagu tabobara yo dufcaddii ugu horraysay ee loo carbinayo inay no qdaan saraakiil ciid an oo wiilal iyo gabdho Jaamiciyiin ah ka kooban.
Munaasibadda lagu furayo tabobarkan oo ka dhacday kuulliyadda tabobarka saraaki isha ee Cabdilaahi Askar, ayaa waxa mada xweynaha kala qaybgalay taliyayaasha kala duwan ee ciidamada Booliska, Militeriga, Ba dda iyo Asluubta, wasiirka wasaaradda Gaa shaandhigga, waxana laga jeediyey hadallo lagu dhiirrigelinayo saraakiisha da’da yaryar ee la filayo inay halkaas kasoo aflaxaan oo qaybo ka mid ahi yihiin ardaydii dhawaan ka baxday Barnaamujka shaqo qaran ee dhinaca ciidamada u baydhay.
Qaar kamid ah saraakiisha dhinaca Tab obarrada u qaabilsan ciidamada qaranka iyo saraakiisha madaxda ka ah kuulliyada tabob arka oo halkaas ka hadlay, ayaa ku dheeraa day dedaalka ay hoggaan ahaan u galeen in dalka laga hirgeliyo mashruuc lagu carbin ayo da’yarta jaamacadaha kasoo baxday ee loo carbinayo sarkaalnimada, waxana ay shaaciyeen inay diyaariyeen dhammaanba qaybihii kala duwanaa ee waxbarashada ee dhallinyaradaasi u baahan yihiin iyo macalli miintii laylin lahayd saraakiishaas da’ da yar.
Taliyaha ciidamada militeriga Somaliland, Sareeye Gaas Nuux Ismaaciil Taani, ayaa madaxweynaha uga mahadnaqay fikirka uu curintiisa leeyahay ee lagu carbiyey dhalliny aradii Barnaamujka Shaqo qaran ee qaybo kamid ahi haatan ku jiraan saraakiisha la lay linayo, waxana uu dhallinyarada kula dardaa rmay inay ka faa’iidaystaan tabobarka ay na siibka u heleen, una dhabar adaygaan sidii ay u dhammaysan lahaayeen.
Taliyuhu waxa uu nasiib iyo hoodo gaar ah ku tilmaamay in saraakiisha cusubi dalko oda dhexdiisa ku helaan dhammaanba qay bihii kala duwanaa ee waxbarashada, sida dugsigii Hoose, kii dhexe, kii sare, Jaama caddii iyo kulliyaddii tababarka saraa kiishaba.
Wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga, Md. Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid, ayaa isaguna dhankiisa guul qaranku gaa dhay ku tilmaamay in dhallinyaro aqoon leh oo jaamiciyiin ahi kusoo biireen ciidamada kala duwan ee qaranka, islamarkaana dalko oda gudihiisa loogu carbinayo Sarka alnimo.
Madaxweyne Biixi ayaa dhallinyarada cusub ee loo carbinayo saraakiisha u jeed iyey khudbad dheer oo la xidhiidha hawlaha sugaya, muhiimadda iyo karaamada ku jirta inuu qofku kamid noqdo ciidamada kala duwan ee qaranka.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu caddeeyey in saraakiisha cusub ee loo carbinayo saraakiishu ay haystaan jidkii qar anka lagu ilaalin lahaa, waxana isaga oo arr imahaas ka hadlaya uu yidhi, "Waxaad bil aabaysaan jidka ah aniga naftaydu waa inay ilaalisaa qaranka iyo danihiisa oo ay khatar walba u badheedhaa qof aan taas yeelinina garaaddona ma qaato askarina ma noqdo oo waa is yeel yeel uun.”
Dhinaca kale, waxa uu madaxweynuhu kormeer ku sameeyey goobaha hurdada, cuntada iyo waxbarashada ee loo diyaariyey saraakiisha dhallinyarada ah ee loo carbi nayo saraakiisha iyo xarun loo dhisay dhall inyarada shaqo qaran oo aaggaas ku taalla.
Puntland oo shaacisay taageerada dha qaale ay ka helayso dowladda federalka Soomaaliya
Wasiirka maaliyadda ee dowlad gobol eedka Puntland, Xasan Shire Abgaal ayaa sheegay in sanadka soo socda ee 2020 lac ag dhan labo milyan iyo bar (2,500,000) ay ka helido onaan dowladda dhexe ee Sooma aliya.
Dhaqaalahaan oo lagu muujiyay misaaniyadda Puntland ee maalintii shalay loo gudbiyay barlamaanka maamulkaas, ayaa ka dhigan in bil waliba P
iyadoo ah deeq bixiye caalami ah ee xasilinta iyo hor umarinta dhaqaalaha dal ka.untland helay so lacag gaaraysa $208,333.Sanadkaan sii idlaanaya ee 2019, Puntland ayaa shaacisay inay sanduuqa dowladda federalka ay ka heshay deeq lacageed oo dhan $1,735,443.
Taageeradaan dhaqaale ayaa sidoo kale dowladda federalku siinaysaa dhammaan do wlad goboleedyada Soomaaliya, waana ka bis miisaaniyadeed oo loogu talo galay in kor loogu qaado dhaqaalahdooda.
Puntland iyo dowladda federalka waxaa haatan ka dhex taagan khilaaf siyaasadeed. Laakiin wada shaqaynta hay'adaha labada dhinac saameyn kuma yeelan khilaafkaas, iyadoo Garowe-na ay maalmahaan shirar ku lahaayeen wasiirro ka socday xukuumada Soomaaliya.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya, Cabdi raxmaan Bayle oo Garowe ku sugnaa todob aadkaan, ayaa uga qeyb galay shir ku saab sanaa Hannaanka Maaliyadda dalka, inka stoo qodobadii kasoo baxay gebagebadii shi rkaas aanan lala wadaagin warbaahinta.
Sidoo kale, wasiirka ganacsiga Soomaaliya C/hi Cali Xasan ayaa todobaadkaan M/Garowe uga qeyb galay shir-weyne looga hadlayay xeerka ganacsiga Soomaaliya.
Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Md. Cabd ulqaadir Axmed-kheyr Cabdi, ayaa ku qa abilay xafiiskiisa Wasaaradda ee Caasi madda Muqdisho, Md. Staffan Tillander, Safiirka Sweden ee JF/Soomaaliya.
Intii lagu guda-jiray kulanka ayaa waxaa laga wadahadlay xoojinta xiriirka labo gee soodka iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal ee saaxiibada ah, iyo sidoo kale wax aa la isla eeggay xaaladdihii ugu dambe eyay ee gobolka iyo dunida ee xiiso gaar ah u leh labada dhinac.
Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ayaa uga mahad celiyay Sweden taageerradeeda Dowlad da iyo Shacabka Soomaaliyeed
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay bilaabeyso diiwaa-galinta Dugsiyada Wax-barashada dalka
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in markii ugu horeysay ay sameyn doonto diiwa-galinta iyo tayo dhowrka du gsiyada Wax bar ashada oo laga sameyn doono guudahaanba dal ka Soomaaliya.
Wajiga hore kormeerkan waxaa lagu bilaabi doonaa Gobolka Banadir oo loo qorsheyey in ay qabsoomto inta u dhaxaysa 25 .11.2019 ilaaa 10.12.2019